Home News Aabaha dhalatay Gabadh Muqdisho lagu dilay oo sheegay in Farmaajo u balanqaaday!!
Aabaha dhalatay Gabadh Muqdisho lagu dilay oo sheegay in Farmaajo u balanqaaday!!
Iyadoo xalay Madaxweyne Farmaajo uu qaabilay Qooyska dhalay Gaabadh ardayad aheed oo lagu dilay Magaalada ayaa waxaa arinkaasi ka hadlay Aabaha dhalatay Gabadhaasi,waxuuna faahfaahin ka bixiyay Kulanka ay la yeesheen Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo.
Waxaa uu sheegay in loo balanqaaday in Cadaalada la horkeenaayo Askariga gabadhiisa dilay,taasna uu ka qabo rajo-weeyn sida uu Yiri.
‘’waxaan rajeeyneeynaa in Askariga cadaalada la horkeeni taasna waxaan ka qabnaa rajo weeyn waxaana noo balanqaaday Madaxweynaha’’ ayuu yiri aabaha.
Hadalka aabbaha dhalatay gabadha ayaa waxaa uu imaanayaa xili shalay la baahiyay warar la xariira soo qabashada askariga dilkaasi geeystay
Previous articleMadaxweyne Farmaajo Maxuu kala hadlay Qooyska Deeqa Yariiseey!!
Next articleFaahfaahin:-Qarax ka dhacay Dulleedka Kismaayo
From Gilbey’s Yard to a US jail, ‘rendered’ Somali youth is...
MW Farmajo: ” Madaxda dalka Safarro badan oon Loo baahneyn ayey...